JINGYE Mmiri ara Homogenizer na-eziga mmiri ara ehi na valvụ homogenizing n'okpuru nnukwu nrụgide, nke mere na ihe ahụ na-aga site na obere ọdịiche dị n'etiti diski valvụ na oche valvụ ahụ ma tinye ya n'ọrụ nke ike dị mgbagwoju anya dị ka ọgba aghara, cavitation na ịkwa osisi. A na - edozi emulsion ma ọ bụ nkwusioru nke mbụ n'ime mmiri emulsion ma ọ bụ mmiri mmiri siri ike.
The mmiri ara ehi & ihe ọ juiceụ juiceụ mgbe nnukwu nrụgide homogenizer homogenization nwere ọtụtụ uru: melite nkwụsi ike na nchekwa nchekwa, mee ka oge mmeghachi omume ọsọ ọsọ, chekwaa mgbakwunye; Ejiri ya na nri, ihe ọverageụverageụ, ihe ịchọ mma na mpaghara ndị ọzọ.
Ihe ọ Dairyụ ,ụ mmiri ara ehi, mmiri ara ehi, yogọt, mmiri ara ehi soy, wdg;
1. A na-ekpuchi igwe niile na akwara igwe anaghị agba nchara, nke nwere ọdịdị na-enwu gbaa, dị ọcha ma dị nro, nchekwa na ịdị ọcha.
2, Nabata ngwa ngwa nke akwara nke na-agba ọsọ ọsọ ọsọ, obere mkpọtụ, ọrụ siri ike na arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya
3. Nnyefe akụkụ adopts splashing ụdị na pụrụ iche mmanụ nri mode iji hụ na mmanu nke akụkụ ọ bụla.
4. Atụmatụ ihu abụọ nke oche valvụ nwere ike ime ka ndụ ọrụ dịkwuo ogologo site n'otu oge.
5, valvụ di iche iche, valvụ elele, ihe nkedo nke igwe alloy, na-eyi mgbochi, mmegide mmetụta, ndụ ogologo ndụ na njirimara ndị ọzọ.
6. The esichara ngwaahịa na-ezi na edo, n'ozuzu n'okpuru 1 ~ 2um.
7. Ngwaahịa ndị ahụ esiri arụ nwere ezigbo nkwụsi ike na ndụ ogologo.
8. The esichara nri na ọgwụ nwere ike melite absorption ego. Ihe kacha mma nha nri, ka ọ dị mfe ka ahụ mmadụ wee banye ya.
9, enwere ike ịhazi ihe ahụ iji meziwanye viscosity na ịta. , kamakwa ịbawanye ụba ngwaahịa).
Nke gara aga: Colloid Mill
Osote: Igwe igwe